EVY's Kitchen: ကြက်သားမှိုကြော်ချက် (အစပ်)
ဒီကြက်သားဟင်းကတော့ မှိုခြောက်နဲ့မို့လို့ အချိုဖြစ်မယ်ထင်ရင်တော့ မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ငရုပ်သီး အစိမ်း၊အနီ ၊အခြောက် ၊ ငရုပ်ကောင်းများပါဝင်တာကြောင့် စပ်ပြီး အရသာထူးကဲသော ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။ ချက်နည်းလဲ လွယ်ကူပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကလည်း ဗမာမီးဖိုချောင်မှာ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေပဲ သုံးထားတာပါ။
ကြက်တောင်ပံ ၃ ခု
2. မှိုခြောက်အနည်းငယ် (လှီးထားပါ)
3. ကြက်သွန်မိတ် ၁ပင် (သေးသေးလှီးထားပါ)
4. ငရုပ်သီးစိမ်း ၃ တောင့် (သေးသေးလှီးထားပါ)
5. ငရုပ်သီးနီ ၃ တောင့် (သေးသေးလှီးထားပါ)
6. ငရုပ်သီးခြောက် ၃ တောင့် (သေးသေးလှီးထားပါ)
7. ငရုပ်ကောင်းစေ့ အနည်းငယ်
· တရုပ်ဟင်းချက်ဝိုင် (စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း)
· ခရုဆီစားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
· သကြားလက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်း
· ဆားလက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်း
· နှမ်းဆီလက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်း
· ကော်မှုန့် အနည်းငယ် (လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်းခန့်)
ဆီစားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း နဲ့ နှမ်းဆီကိုရော အပူပေးပြီး ကြက်သားများကို ကြော်ပေးပါ။
အညိုရောင်နဲနဲသမ်းရင် ငရုပ်သီးအားလုံးနဲ့ ကြက်သွန်မိတ်ကိုထည့်ကြော်ပါ။
အနံ့မွှေးလာရင် မှိုခြောက်နဲ့ ငရုပ်ကောင်းကို ထည့်ကြော်ပေးပါ။ ကော်မှုန့်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဟင်းခပ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထည့်ပေးပါ
၂ မိနစ်လောက်နေရင် ကော်မှုန့်ကို ရေ တရုပ်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးနဲ့ ဖျော်ထည့်ပေးပြီး မီးနဲနဲနဲ့ မိနစ် ၂၀လောက်တည်ပေးပါ။
အရည်ပျစ်ပျစ်ကျန်ရင် မီးပေါ်မှချပြီး သုံးဆောင်ပါ။
Posted by Evy at 12:24 PM
စမ်းချက်ကြည့်မယ် မမ :D
တီတင့်နဲ့သားနှစ်ယောက်က အစပ်သိတ်မစားတော့ ငရုပ်သီးတွေလျှော့ထည့်ပြီး စမ်းချက်မယ် Evy ရေ။ နည်းလေးယူသွားတယ်နော်း)